ग्रीन कैम्पिंग - थैला, पिकनिक कम्बल, बीच तौलिया सो पनरोक कैम्पिंग पाल,
द्रुत ड्राई तौलिया
नयाँ क्षेत्र harnesses र लिंक pas
रियल हाउस पाल
उच्च गुणस्तर अल्ट्रालाइट आमा सुत्ने झोला
क्यानभास सुत्ने झोला
कि पाल मात्र कपडा कति पानी स्तम्भ सम्बन्धित छैन पनरोक छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डिजाइन र कारीगरी छन्। यो पनि यो पानी स्तम्भ 5000mm उल्लेख, सजिलो सुनिन्छ, तर बजार मा पाल धेरै पनरोक छैन। लागि इनडोर वर्षा परीक्षण उपकरण, यो सम्भव हल्का वर्षा कुनै पनि समयमा आँधी छ बनाउन जो धन्यवाद, यसलाई पूर्ण पनरोक पाल उत्पादन गर्न सक्षम हुन हामीलाई सुनिश्चित गर्न कुनै पनि लीक संभावना पाउन मदत।
आफ्नो सुत्ने झोला को सिलाई निर्माण के? आफ्नो उद्देश्य लागि भनेर फिट राम्रो छ? गर्दैन आफ्नो आपूर्तिकर्ता जो निर्माण प्रत्येक निर्माण को आफ्नो सुत्ने झोला र सुविधाको लागि प्रयोग गरिन्छ तपाईं भन्नुभयो? सामान्यतया, बजार मा2भिन्न निर्माण त्यहाँ हो, एच कोठामा र डबल एच chamber.The एच च्याम्बर को खोल, इन्सुलेशन सी र सीधा सँगै अस्तर, सरल र सबै भन्दा लोकप्रिय निर्माण हो। यो निर्माण सामान्यतया गर्मी-वसन्त मोडेल लागि प्रयोग गरिन्छ।
तपाईं तहहरू कति आफ्नो पिकनिक कम्बल को, भित्र के थाहा छ? प्रत्येक फरक पिकनिक कम्बल को सुविधा के हो? यसलाई सामान्य यसरी गर्छन्। एक्रिलिक, ध्रुवीय ऊन र मुद्रित पलिएस्टर शीर्ष सामाग्री रूपमा, पीई र एल्यूमीनियम पन्नी, PEVA, तल रूपमा पनरोक Oxford। मध्य सामाग्री रूपमा स्पन्जले र पलिएस्टर फाइबर। पिकनिक कम्बल केही2तहहरू मात्र छ। तपाईं बजार मा विभिन्न वस्तुहरू पाउन सक्छ, हाम्रो लागि, यो कुनै समस्या छ। हामी विभिन्न पिकनिक कंबल को 10,00,000 भन्दा बढी उत्पादन, म हामी तपाईं को लागि सही वस्तु छ विश्वस्त छु। थप जानकारीको लागि, सोधिने प्रश्न मा जाँच गर्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।